ဘယ်မိဘမဆို သူတို့ကလေးတွေကို အဆုံးအစမရှိချစ်သင့်ပါတယ်။ သို့မှသာ ကလေးတွေဟာ ကြံ့ခိုင်ပြီး စွမ်းရည်ပြည့်ဝသော လူကြီးတွေဖြစ်လာပြီး ဒီလိုရက်စက်တဲ့ကမ္ဘာကြီးကို ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ ကြီးပြင်းလာနိုင်အောင် ကလေးတွေကို ပျိုးထောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်မကောင်းစရာ ကလေးတွေဟာ စက္ကန့်နဲ့အမျှ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခံနေရပါတယ်။
ကလေးသူငယ်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုဟာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကလေးငယ်ပေါင်း ၆.၆သန်းအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနေပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ ကလေးငယ် ၈ ယောက်မှာ ၁ ယောက်လောက်က လျစ်လျူရှုခံခြင်း၊ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ရုပ်ပိုင်ဆိုင်ရာညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုခံနေရပါတယ်။ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုမှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိပ်စက်သလိုမျိုး ဒဏ်ရာအမာရွတ်မကျန်ခဲ့တာကြောင့် သက်ရောက်မှုမပြင်းထန်သလိုမျိုး ထင်ရပါတယ်။
မိဘတွေအနေနဲ့ သူတို့ကလေးတွေကို အမှားလုပ်မိတဲ့အခါ ပြစ်တင်ဆုံးမပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ကလေးရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးစားမှုကို မထိခိုက်စေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလိုထိခိုက်စေလျှင် ဒါဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှင်းပန်းမှုဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုဟာ သိမ်မွေ့ပြီး ဖြစ်ပျက်လွယ်ပါတယ်။ ကလေးငယ်ရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တန်ဖိုးထားမှု၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုနှင့် ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှုတွေကို စနစ်တကျဖျက်စီးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ နှုတ်ဖြင့် စော်ကားခြင်း၊ brainwash လုပ်ခြင်း၊ ဝေဖန်ခြင်း၊ အရှက်ခွဲခြင်းနှင့် အယုံအကြည်ကင်းမဲ့ခြင်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ အကျိုးဆက်တွေက ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာနိုင်သလဲ?
၁။ သင့်မှာ ခနော်ခနဲ့ဆက်ဆံရေး (သို့) မကျန်းမာတဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုရှိတယ်
သင်သာ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပြီး စော်ကားတတ်တဲ့ မိဘတွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာရသူဖြစ်တယ်ဆိုရင် နံပါတ်(၁) အချက်က သင်ကြုံကို ကြုံတွေ့ရမယ့် ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သင့်မိဘတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ပထမဆုံးဆက်ဆံရေးအနေနဲ့ ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရမယ်ဆိုရင် တစ်ခြားလူတွေကို ယုံကြည်တတ်တဲ့ သင့်ရဲ့ စွမ်းရည်ကလည်း ဖျက်ဆီးခံရနိုင်ပါတယ်။ ငယ်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကနေပဲ ကျန်းမာသော ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းဖို့ ခက်ခဲစေပါလိမ့်မယ်။
သင့်မှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေပါဝင်သော မကျန်းမာတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ သင့်ရဲ့ငယ်ဘဝမှာ စော်ကားတတ်တဲ့မိဘတွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ ညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၂။ သင်က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လေးစားမှု နိမ့်ကျနေတဲ့ လူမျိုး
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးစားမှုနိမ့်ကျခြင်းနှင့် ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်တန်ဖိုးထားမှုနည်းပါးခြင်းက ကလေးဘဝမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးဘဝက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှင်းပန်းခံရတဲ့ ဒဏ်ရာအမာရွတ်တွေကို အလွယ်တကူဖြတ်တောက်လိုက်တာက လူကြီးဘဝမှာ သင့်ရဲ့ အတွေးအမြင်တွေ၊ ခံစားမှုတွေနဲ့ အပြုအမူတွေအပေါ် သက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
မိမိကိုယ်ကိုယ်လေးစားမှုနိမ့်ကျခြင်းက သင့်ကို အသုံးမကျသူ(သို့) တန်ဖိုးမရှိသူစတဲ့ ဆက်တိုက်ဝေဖန်ခံရမှုတွေရဲ့ အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သံသယဝင်ခြင်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဝေဖန်ခြင်းနှင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မုန်းခြင်းက ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ မျှော်လင့်ချက်နှင့် မာနကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ကလေးဘဝမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံရခြင်းက သင့်ရဲ့ လူကြီးဘဝထဲမှာ စိတ်ကျရောဂါကိုတောင် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
၃။ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို ဖိနှိပ်သူမျိုး
သင့်မှာ စိတ်ခံစားမှုတွေကို ဖော်ပြတဲ့နေရာမှာ အားနည်းနေတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုရှိနေလား? သင့်ရဲ့ မကောင်းတဲ့ မိဘတွေကို သင့်စိတ်ခံစားမှုတွေကို ထုတ်ပြောဖို့ ဟန့်တားခဲ့မယ်ဆိုရင် နောက်ပြီး သင့်ရရဲ့ ခံစားချက်တွေကို လျစ်လျူရှုပြီး ရှေ့ဆက်ဖို့ သင်ကြားခံခဲ့ရမှာ သေချာပါတယ်။ ဒီအရာက အနိုင်ကျင့်ခံရသော ကလေးငယ်တိုင်းဖြေရှင်းကြတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြတ်ပြတ်သားသားမပြောရဲဘူးဆိုရင် ဒါဟာ ငယ်ဘဝအနိုင်ကျင့်ခံရခြင်းရဲ့ သတိပေးလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၄။ သင့်မှာ လူတွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုနှင့် အတည်ပြုချက်တွေကို ရှာဖွေတတ်တဲ့ အကျင့်ရှိတယ်
ကလေးဘဝမှာ အချစ်မခံရခြင်း၊ အာရုံစိုက်မခံရခြင်း၊ အသိအမှတ်ပြုမခံရခြင်းတို့ကြောင့် တစ်ခြားလူတွေဆီက အသိအမှတ်ပြုခံရမှုနှင့် အာရုံစိုက်ခံရမှုကို တကူးတကရှာဖွေတတ်ကြပါတယ်။ အလွန်အကျွံအာရုံစူးစိုက်မှုကို ရှာဖွေတတ်သောအမူအကျင့်ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပိုကောင်းလာစေတာမှန်ပေမယ့် ခဏတာပါပဲ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ဒီအချက်ကလည်း ငယ်ငယ်က အနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့ မိဘတွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာရခြင်းရဲ့ ထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၅။ လူမှုဆက်ဆံရေးကိစ္စတွေမှာ အားနည်းခြင်း
ငယ်ငယ်က စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုဟာ လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ သင်ယူမှုစွမ်းရည်ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး အရွယ်ရောက်လာချိန်မှာ အထီးကျန်ခြင်းတို့ ဖြစ်စေပါတယ်။ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းမရှိသလောက်ပြီး လူမှုရေးအခြေအနေတွေမှာ ရှက်တာ၊ စိတ်မသက်မသာဖြစ်တာ၊ လူမြင်ခံရမှာ ရှက်တာ နောက်ဆုံး အဆိပ်သင့်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေမှာ တဝဲလည်လည်ဖြစ်နေတာတွေက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှုခံရမှုတွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပါတယ်။
၆။ ဘဝအတွက် အဆိုးမြင်တတ်သော စိတ်နေသဘောထားရှိခြင်း
အဆိပ်အတောက်များပြီး အကျင့်မကောင်းသော မိဘတွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာသူတွေဟာ ဘဝမှာ အဆိုးမြင်တတ်ပြီး အကျင့်မကောင်းသူတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သူတို့မိဘတွေရဲ့ အမူအကျင့်တွေဟာ သူတို့အပေါ်မှာလည်း အကျိုးသက်ရောက်ပြီး ရောင်ပြန်ဟပ်တတ်ပါတယ်။ ဘဝရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲကာလတွေမှာ အဆိုးမြင်နေခြင်းက ဘဝတစ်ခုလုံးစာ တိုးတက်မှုအတွက် အနှောင့်အယှက်များစွာဖြစ်စေပါတယ်။
၇။ သင်ဟာ တစ်ခြားလူတွေကို ရန်လိုတတ်သူ
လေ့လာမှုတွေအရ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့် ပြင်းထန်သော အကြမ်းဖက်ကျူးလွန်မှုတို့အကြား ခိုင်မာသော ဆက်နွယ်မှုရှိနေတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ သင်ဟာ အနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့ မိဘတွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာသူဆိုလျှင် တစ်ခြားလူတွေအပေါ် အရမ်းရန်လိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ သင့်ရဲ့ အတုခိုးတတ်မှုကြောင့် ဖြစ်သလို တစ်ခုခုကို ထိန်းချုပ်ချင်တာကြောင့် အနိုင်ကျင့်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
၈။ သင်ဟာာ ပြီးပြည့်စုံသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်
သင့်ရဲ့ မပြည့်စုံမှုတွေကို လက်ခံဖို့ ခက်ခဲနေပါသလား? သင့်ရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မထိုက်တန်သူတစ်ယောက်အဖြစ် တွေးနေမိတဲ့ ကြောက်စိတ်တွေဟာ သင့်ကို ပိုကောင်းလာအောင် ပိုတွန်းအားပေးတယ်။ ပိုပိုပြီး ကြိုးစားတယ်။ သို့ပေမယ့် ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာက ပြီးပြည့်စုံဖို့ ကြိုးစားခြင်းက သင့်ရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေကို တဖြည်းဖြည်းပျက်စီးစေပါလိမ့်မယ်။